Broadway Musicals - Chimwe Chezvinhu Zvekuita muNew York | Kufamba Nhau
New York ndeimwe yeaya nzvimbo ine yakakura yekushanya yekupa. Ndokusaka paine sarudzo dzakawanda zvekuti isu tichagara tichida mazuva mashoma kuti tizadzise. Pakati pavo vese, nhasi tichagara nemumwe wevakakurudzirwa zvakanyanya uye nevateereri vese: Broadway mimhanzi.
Zvirokwazvo wakambonzwa nezvazvo kana pamwe watove. Asi imwe nzira kana imwe, ndiyo imwe yezvinhu zvikuru zvekuita muNew York. Imwe yenguva dzisingakanganwike dzinozonyorwa mu retina yedu. Tichafarira iyi nzira zvakare Times Square, kuti pakupedzisira uende kune mimwe mitambo muchimiro chemimhanzi kana opera.
1 Kufamba kuburikidza neBroadway uye Times Square
2 Nei Broadway mimhanzi ichive inofanirwa-kuona chiitiko?
3 Iyo inonyanya kukosha mimhanzi yatiri kutsvaga
Kufamba kuburikidza neBroadway uye Times Square
Sezvatakambotaura, Broadway inzira inoyambuka imwe yenzvimbo dzinozivikanwa munzvimbo iyi: Times Square. Chikamu chekutanga kubva kuCity Hall kusvika kuBronx. Saka munzira yaro inosiya migwagwa yakawanda pamwe nenzira dzakawanda. Asi ichokwadi kuti kune vese, Times Square ndiyo imwe yeakanyanya kukosha. Nechikonzero chei? Zvakanaka, nekuti inzvimbo inowakirwa sarudzo dzakawanda dzekutandara, iine anopfuura makumi mana emitambo yatinenge tiinayo Nzvimbo inogara yakabatikana, asi zvakakodzera kuti uzive.
Muchivara, tichaona kuti mwenje nezviratidzo zvinotibata sei. Kana iwe uchida kutsvaga iyo nzvimbo zvishoma, usati waenda muchiratidziro, unogona kuzviita uchiziva matheatre ese aripo pakati pe6th Avenue na8th Avenue. Kubva munzvimbo ino unokwanisa kuwana mamwe emitambo yakakosha, pakati payo patinogona kuratidza zvese 'Zvikuru' uye 'Imperial'.
Nei Broadway mimhanzi ichive inofanirwa-kuona chiitiko?
Pese patinoenda kune imwe nzvimbo, tinozvibvumira kutorwa netsika dzayo uye nesarudzo dzevashanyi dzainotipa. Mune ino kesi, hatigone kuve vashoma. Sezvo mimhanzi yeBroadway iri chikamu chenzvimbo ino, tsika nemagariro. Icho chimwe cheaya anoratidza kuti iwe unofanirwa kurarama kamwe muhupenyu hwako, zvirinani. Sezvo chiri chiitiko chinopfumisa uye chakasarudzika, pasina kupokana. Uye zvakare, mazhinji emazita ane mukurumbira uye zviso zvenyika yevaraidzo vakaitawo mamwe maratidziro munzvimbo ino. Pasina kuenda kumberi, kubva kuGroucho Marx, Audrey Hepburn kana Robert Redford kuna James Dean, Marlo Brando kana Grace Kelly pakati pevamwe vakawanda.
Iyo inonyanya kukosha mimhanzi yatiri kutsvaga
Ichokwadi kuti vanogona kuve vakasiyana kwazvo uye vemhuri yese. Dzimwe nguva vanochinja, asi kune zvimwe izvo zvinonyanya kukosha. Muchokwadi, dzakakurumbira ndedze 'Shumba King', 'Chicago' kana 'Iyo Phantom yeiyo Opera'. Asi pasina kukanganwa mamwe mazita akadai se'Vakaipa ',' Les Miserables ',' Runako uye Chikara 'kana' Mamma Mía '. Ipo 'Aladdin' kana 'Frozen', vari zvakare mamwe akakurumbira. Zvinotaridza kuti maDisney-themed ndiwo anogara ari iwo anotora zvinzvimbo zvepamusoro. Kunyangwe iwe uchida aya mazita anotaurwa, kana mamwe aunogona kuwana pane bhiribhodi, zvakanakisa kuwana matikiti pamberi pemapeji akadai Hellotickets, webhusaiti muSpanish, kwaunogona kutenga mumaeuro uye nebasa revatengi vemuno. Mazhinji emabasa aya anowanzo kutengesa kunze kwemavhiki apfuura, saka tinokurudzira kuti usamirire kuatenga iwo kubhokisi hofisi
Ichokwadi kuti hatirangarire nguva dzose kana nekuti chisarudzo cheminiti yekupedzisira, kuti hatina matikiti. Usatombo kunetseka, nekuti kamwe 'in situ', unogona zvakare kuzvitenga. Kana iwe uchingoda kuenda kuchiratidziro, asi iwe hauna kufanogadzirira kune chero mumwe kunyanya, pane Times Square chitoro icho chine tikiti rekutengesa nemitengo yakanaka kwazvo, sezvo asiri zvigaro zviri padhuze padariro. Asi sekutaura kwedu, inogara iri sarudzo yekufunga. Kune rimwe divi, munhandare imwecheteyo vachange vainewo matikiti, uye musi iwoyo wekutamba chinhu chekutanga mangwanani, vanopa mutengo wekutanga kusvika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » General » Kufarira » Zvinhu zvekuita muNew York: Enda kuBroadway mimhanzi
Zvokuona muRiga, Latvia